Ity takelaka ity dia (toy ny ao amin'ny Vondrona Eoropeana rehetra faritra) nanery anao hanaiky ny fanambarana fiainana manokana ny vaovao mifototra amin'ny lalàna, izay tonga AVG-kery tamin'ny May 25 2018.
1. Contact Information Fanambarana Martin Vrijland
Ny fotony dia azo henoina amin'ny alalan'ny endrika mifandray amin'ny tranonkala.
Tranombarotra momba ny varotra: 60411996
Fametrahana: St. Caelciliapad 5, 6815GM, Arnhem
2. Ny tahirin-kevitrao dia nangonina tamin'ity tranonkala ity ho an'ny tanjona marobe:
fisoratana anarana ao amin'ity tranonkala ity
mametraka ny valinteninao
afaka mandefa mailaka amin'ny adiresy mailakao
Ho lasa mpikambana mandray karama amin'ny endrika fanomezana
afaka mametra ny fahazoana miditra amin'ny lahatsoratra sasany
misoratra anarana mba hahazoana ny fampahafantarana mivantana ny fisehon'ny lahatsoratra vaovao amin'ity tranonkala ity amin'ny alàlan'ny mailaka
fisoratana anarana mba handraisana ny gazetiboky isan-kerinandro sy / na hafa
manome hevitra anao amin'ny hevitry ny fandatsaham-bato iray / fitsapan-kevitra
fanamarinana statistika momba ny isa sy hitsidika
mifandray amin'ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra izay manatsara ny fizarana lahatsoratra
Afaka mamaritra raha mampiasa adobe ianao
3. Mpifanaraka izay afaka mahazo ny angona manokana ho an'ny fanodinana:
Ny tahirin-kevitrao dia ho voatahiry ao amin'ny lohamilin'ny solontenan'ny Martin Vrijland Foundation aloha.
Ankoatra izay, ny angon-drakitrao dia alefa any amin'ny mpamatsy plugin amin'ny olon-kafa izay mampiasa ny data ho an'ny fanodinana daty, araka ny voalaza ao amin'ny teboka 2. Izany dia mahakasika ireto plugins manaraka ireto ary koa ireo orinasa izay nanangana ireo plugins ireo:
Advertise Advanced by Thomas Maier
Fifandraisana amin'ny contact 7 Takayuki Miyoshi
Hafatra mailaka amin'ny mpanjifany Gopi Ramasamy
MailChimp avy amin'ny mailchimp.com
Polldaddy votoatiny & Ratings by Automattic, Inc.
Google Adsense avy amin'i Googel Adsense
Hampiditra Content Content Pro Ekena ny ekipan'ny Content Content
Social Counter amin'ny alalan'ny Prisna
Ady ara-tsosialy - Pro by Warfare Plugins
YOP Vola Pro yourownprogrammer
4. Ny vanim-potoan'ny fitehirizana ny angona:
Ny tahirin-kevitrao dia hovorina sy / na ampiasaina mandritra ny vanim-potoana nosoratanao ho an'ity tranonkala ity. Tsy maintsy manoratra mivantana ianao ary mametraka fangatahana hamafa ny angon-drakitrao. Ny tahirin-kevitrao ho an'ny gazetiboky sy / na ny fanavaozana ny fanavaozana mivantana momba ny lahatsoratra navoaka vao haingana dia ho voavonjy ihany koa raha efa nisoratra anarana ianao. Amin'ny toe-javatra rehetra, tsy maintsy manosika mavitrika amin'ny fanatontosana ny serivisy rehetra amin'ity tranonkala ity ianao.
5. Zonao momba ny angon-drakitrao:
Manan-jo hijery, hanitsy na hamafa ny angona ianao. Azonao atao ihany koa ny manaiky ny fampiasana ny angona manokana. Tsy maintsy manao izany mialoha ianao. Ve ianao hanao izany rehefa afaka izany, dia manoratra azo atao amin'ny alalan'ny voasoratra namany Sary momba ny adiresy paositra ny Foundation Martin Vrijland, araka ny voalaza ao amin'ny Antenimieran'ny varotra. Raha hita fa misy tanjona ara-dalàna dia ny hanangona angon-drakitra, ny Foundation dia manana zo hijanona ho fampiasana ny angon-drakitra ary hatrany. Tsy ny fanoherana rehetra no omena amin'ny famaritana.
6. Valin'ny lahatsoratra:
Ny valin-teninao rehetra navoakanao dia tanteraka ho an'ny kaontinao manokana. Midika izany fa amin'ny toe-java-misy rehetra dia mety ho tompon'andraikitra amin'ny zavatra soratanao ianao; na ireo fanehoan-kevitra voalohany dia ankatoavina amin'ny alàlan'ny fanamoram-pahamendrehana nataon'ilay mpitantana ny tranokalan'ny fandefasana azy eo ambanin'ny lahatsoratra.
7. Zo hamindra ny data:
Ny Martin Vrijland Foundation dia mamaritra ny zo handefa ny angon-drakitra ho an'ny antoko fahatelo amin'ny fampiasana ny fanodinana ny angona raha toa ka mifanaraka amin'ny tolotra atolotra amin'ity tranonkala ity. Mety hitranga izany, ohatra, amin'ny fampiharana ny rindrambaiko plug-in izay manao fanadihadiana maromaro momba ny antontan'isa, saingy mety mihatra koa izany amin'ny alàlan'ny fanovana ny serivisy tolotra mailaka ho toy ny mailaka na fanavaozam-baovao momba ireo lahatsoratra vao napetraka. Azo ampiharina koa izany amin'ny fifindrana any amin'ny mpizara hafa na mpamatsy trano, ohatra.
8. Ny zo hanaisotra ny data:
Ny tranonkala martinvrijland.nl dia manome ny safidy 1 fantatra fa afaka manondro anao fa tsy mila ampiasaina intsony ny angona misy anao. Izany dia iharan'ny zo hisintaka. Azonao atao ny mampihatra ny zonao amin'ny fisintonana amin'ny alàlan'ny fangatahana fangatahana an-tsoratra amin'ny alàlan'ny dika mitovy amin'ny karatra ID na pasipaoro ary pikantsary amin'ny adiresy IP anao. Porofon'ny maha-olona anao izany. Azo atao izany ho an'ny adiresin'ny mari-pamantarana an'ny Martin Vrijland, araka ny voalaza ao amin'ny Chamber of Commerce. Na izany aza, raha toa ka misy tanjona ara-dalàna hanangonana ny angon-drakitrao, ny fototra dia mitazona ny zo hanohy hampiasa sy hitazonana io angona io. Tsy ny fanoherana rehetra no omena amin'ny famaritana. Ny antontan-taratasy nalefanao dia ho rava taorian'ny fanamarinana.
9. Manam-pahefana amin'ny angona manokana:
Manan-jo hanao fitarainana momba ny fampiasana ny angon-drakitra miaraka amin'ny angon-drakitra manokana ianao. Fitsarana ara-dalàna izany. Ka raha manana fitarainana momba ny fomba ifandraisan'ity tranonkala ity ny angon-drakitrao manokana ianao dia azonao atao ny mandefa azy araka ny antontam-baovao manokana.
10. Fanesorana ny angona:
Raha tsy te-hanome ny mombamomba anao ianao na te hanala izany dia tsy afaka mampiasa ny tolotra atolotra amin'ity tranonkala ity ianao. Ny mpiandraikitra dia manakana ny zo hanakana ny adiresy IP raha hamangy an'ity tranonkala ity.
11. Hafatra voafetra:
Amin'ny maha-mpikambana karama izay miditra amin'ny endriky ny fanomezana raikitra isam-bolana, na amin'ny alalan'ny banky miverimberina famindrana, reperterende bola PayPal na miverimberina famindrana, ampiasao ny vaovao, mba hahitana raha manana fahafahana hahazo vokatra sasany rakotry ny fidirana voafetra. Izany rehetra izany no mifehy amin'ny alalan'ny iray mandeha ho azy plugin, araka ny voalaza eo ambany 3 hevitra, miaraka amin'ny Hametra Content Pro. Ny angon-drakitrao dia ampiasaina mba hamaritana raha toa ka azonao atao ny miditra amin'ireo lahatsoratra izay hovakian'ny mpikambana fotsiny.
Ny famaritana ny mpikambana dia ny olona rehetra izay niditra teo amin'ny fandoavam-bola ao hamerina ny endriky ny fanomezana ho an'ny Foundation Martin Vrijland ho an'ny fe-potoana voafaritra, na tsy voafetra ny haino aman-jery ara-bola izay na inona na inona, ary ny ity rohy ity nanao sonia. Raha mpikambana ianao, tokony ho hitanao ny angoninao ity rohy ity. Azonao atao koa ny manitsy na manafoana ny rafitrao momba ny mpikambana ao aminao. Ny maha-mpikambana anao dia raisina ho toy ny fanomezana ho an'ny fanorenana Martin Vrijland.
Total visits: 14.657.919